Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Ihe na-emeghị ka eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Whiz Kid bụ onye a maara aha ya nke ọma “Callum“. Anyị Callum Hudson-Odoi Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta mmekọrịta, ndụ ezinụlọ, ndụ onwe onye na eziokwu efu.
Ee, onye ọ bụla maara na e jiri ya tụnyere ya Eden Hazard n'ihi mgbawa ya na aghụghọ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ ndụ Callum Hudson-Odoi nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya zuru oke Callum James Hudson-Odoi. A mụrụ Callum na 7th nke November 2000 na ndị mụrụ ya Mr na Mrs Bismark Odoi na London Borough nke Wandsworth, United Kingdom. A mụrụ ya dị ka nwa nke abụọ nke ụmụ nwoke atọ nye nne na nna ya mara mma nke e sere n'okpuru.
Ezinụlọ Callum Hudson-Odoi nwere mgbọrọgwụ Ghan na ọmụmụ ya na UK bịara n'ihi mkpebi nne na nna ya mụrụ nwa ha nke abụọ na mba ọzọ. Aha nna ya “Odoi ” is aha dị ihe dị ka mmadụ 23,278 na Ghana, West Africa (ForeBear Report).
Hudson-Odoi toro nwanne nwoke bụ Bradley Hudson-Odoi bụ onye 12 afọ ya agadi na London Borough nke Wandsworth. Ọzọkwa, nwanne ya nwoke nke a na-amaghị aha ya.
Site na nyocha anyị, anyị edoghị ma ọ bụrụ na nne nne ya mụrụ nwanne nwanne Hudson-Odoi bụ Bradley na-eche na ọ dị obere dị ka elere anya na foto ya n'elu. Otú ọ dị, Na mbido ụmụnne niile hụrụ ịhụnanya n'ịkụ bọl ekele maka nna ha Bismark Odoi onye nyere ụmụ ya nwoke bọọlụ.
Bismark Odoi bụbu onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ ọkpọ Ghana na-egwuri egwu maka Hearts of Oak, klọb egwuregwu na Accra, Ghana. Mkpebi Callum maka ịgba bọl na-akwụ ụgwọ dị iche iche n'ezie n'ihi na ọ kpalitere ikpe na-aga nke ọma na idebanye aha ndị ntorobịa na Bad of London.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ọrụ mmalite
Hudson-Odoi sonyeere ụlọ akwụkwọ ntorobịa Chelsea na afọ 2000 mgbe ọ dị afọ 7. Hudson-Odoi toro ruo mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụla karịa ịkụzi usoro aghụghọ bọl nke ọ kwenyere na ọ bụ otu n'ime ihe dị mkpa nke winger nke oge a. Lelee ihe omuma nke omuma ya n'okpuru;
Ingkụzi usoro aghụghọ bọl mere ka ọ ghọọ ihe dị iche na pitch. Hudson-Odoi ji oge ntorobịa ya na ndị ntorobịa Chelsea ghara ịbụ onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ, kama ọ bụ onye na-eme ihe n'eziokwu nke ga-arụsi ọrụ ike na ndidi iji mee ka ọ na-agagharị ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị dị oke ọnụ dị ka a hụrụ n'okpuru;
Ị maara?J jga n'ihu na-agba bọl na-eduga na nkà nchịkwa bọl nke Hudson-Odoi na ọsọ ọsọ nke ụkwụ ya nke mesịrị kọwaa ụdị egwuregwu ya.
N'ikwu okwu banyere mkpali na ọsọ ọsọ ya, Hudson-Odio ekwenyela na Q&A na nso nso a na-etolite, arụsị ya bụ ndị otu, Eden Hazard na Obi (Akụkọ DailyMail).
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ụzọ Ebube
Ihe Nleta nke Ịga nke Ọma - The Trophy Teen:
Ọbụna dịka ọ gafeworo ọnwa atọ nke ịtụgharị 18, Hudson-Odoi abụghị onye ọbịbịa n'ịchịkọta ọlaọcha. Ọsọ ụkwụ ya mechara kwụọ ụgwọ ndị omempụ ka ọ na-arụ ọrụ dị mkpa maka ihe ịga nke ọma na ụlọ akwụkwọ ndị dị na Chelsea. Ị maara?… Hudson-Odoi mere akụkụ kachasị mma n'òtù ya na-eburu ọgbọ egwuregwu abụọ nke Ndị Ntorobịa na nke Under-18 Premier League.
Nnukwu ihe a na-agbakwụnye na nchịkọta gbasara ọgwụ:
Na-agbakwụnye na nchịkọta ya, Hudson-Odoi bụkwa akụkụ nke squad Under-17 2017 World Cup nke meriri agba okpuru World cup. O tinyere ndi mmadu abuo aka n'egwuregwu nke okpukpu abuo nke huru England ka o si nweta ihe mgbaru ala abuo iji weghaa Spain 5-2.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Ihe omume 2018 / 2019 siri ike nke Hudson-Odoi mere n'oge gara aga bịara dị ka ihe ijuanya ọ bụghị nanị ndị na-ekiri ihe na-ekiri ihe ma ọ bụ na-emekarị ka ya na ndị òtù ya na ndị ọrụ Chelsea na ndị ọhụrụ họpụtara Maurizio Sarri. Omume ya n'oge ahụ gosipụtara akara mgbanwe na ọrụ ya.
Hudson-Odoi mgbe 2018 / 2019 preseason gosipụtara onwe ya na ọ malitere ịmalite mmekọrịta chiri anya Sarri onye mesiri ya obi ike na ya na ndi otu ndi otu Chelsea na-abia n'ihu oru ya.
Ozugbo nkwa maka nsonye 2018 / 2019 na-amalite inwe obi abụọ, ndị na-egwu egwuregwu si na Europe dị ka Bayern Munich na Real Madrid na-enwe ohere ka ha malitere ịfụ ọkpụkpọ. Nke a mere Sarri mechie nkwa ya. Ruo njedebe nke 2018, mmekọrịta ha malitere ifuru ọzọ na Hudson-Odoi na-enyeghachi onye isi ya ọzọ.
Dị ka n'oge ederede, otu nkwekọrịta ọhụrụ nọ na tebụl maka Hudson-Odoi. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ na-eto eto, ma Callum Hudson-Odoi bụ onye ọ na-eme ka ọ bụrụ na onye ọhụụ na-eleghara anya n'ihu ọha n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị nnọọ nzuzo ma ọ bụ ikekwe ọ dịghị adị ma ọ dịkarịa ala ugbu a.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Mata Callum Hudson-Odoi ndụ onwe ya ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Mgbe ụfọdụ naanị ịbụ dike na pitch ezughị ezu maka Hudson-Odoi dịka ọ gbalịrị ịnye okpu onye egwu.
N'ihe ndekọ nke onwe gị, Hudson-Odoi bụ onye nwere ọgụgụ isi ma nwee obi ike. O kpebisiri ike ma nwee mkpebi ọ hụrụ n'anya ma nọgide na-agbanye ruo mgbe ọ ga - abụ onye kachasị mma na ọrụ ya.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Dị ka n'oge ederede, Hudson-Odoi bụ onye kachasị ọhụrụ na ezinụlọ Ghanian ịpụta ebe ahụ. Na mbu, ihe banyere nna ya na nwanne ya nwoke bu onye kachasi elu. Ka ọ dị ugbu a, o doro anya na Hudson-Odoi abụrụla onye a kacha mara amara n'ezinụlọ ya.
Banyere Onye Nne ya tọrọ ya:
Bradley, n'adịghị ka nwanne ya nwoke, nwere ọrụ na-akụda mmụọ mgbe ọ dị afọ Callum. Nke a bụ oge ọ gbanwere ka ọ nọrọ na Premier League.
Ọ bịanyere aka na mahadum na Fulham mana ọ dịghị eme ka ọ bụrụ ndị mbụ ha na Craven Cottage. Onye na-egbu egwuregwu ahụ kwụsịrị igwu egwuregwu na Premiya ma kpebie ịbanye na football.
Callum Hudson-Odoi Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Eziokwu efu
Michael Essien, onye bụbu onye egwu bọọlụ Chelsea FC na onye mba Ghana nke meriri aha abụọ Premier League na Champions League mgbe ọ nọ na Stamford Bridge, bụ nnukwu onye na-anụ Callum Hudson-Odoi. Essien weere na Instagram na-esote Hudson-Odoi nke England n'okpuru 17 World Cup iji chọọ ya ekele dị ka ọ kpọrọ ya “Obere bro”.
Ntụle a jụrụ ajụjụ maka ma Michael Essien metụtara Callum Hudson-Odio.
Ọ na-ejide ihe ndekọ European:
The dop British-Ghanian whiz nwa kụrụ afọ 9 afọ Europe dị ka ọ meghere ihe mgbaru ọsọ maka Chelsea FC megide PAOK na 2018 / 2019 UEFA Europa Njikọ otu.
Callum Hudson-Odoi mere ka mmiri na-enwu ọkụ site na ịghọ nwatakịrị nwanyị (18 afọ na 22 ụbọchị ochie) iji akara na asọmpi ahụ.
Otu onye agbapụta ozugbo ewepụtara ka ọ bụrụ onye na-elekọta ya:
Ka ngwaahịa oku nke Hudson-Odoi nọgidere na-ebili, onye òtù Chelsea bụ Player Willian, kpebiri ịbanye ohere site na ịrịọ ka ọ bụrụ onye ọrụ ya (Daily Mail ozugbo Akuko). Mkpebi a na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ n'ihi na onye Brazil hụrụ ọdịnihu na nwa ahụ ga-aghọ onye ọkpụkpọ kachasị mma na onye dị oké ọnụ ahịa n'ụwa taa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị na-akpọ Callum Hudson-Odoi Child. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.